I-Ellicott Export Endure: Ama-Dredges Amabili Amabili angama-20-intshi (500 mm) asendleleni ebheke eBangladesh - i-Ellicott Dredges
I-Ellicott Export Endure: Ama-Dredges Amabili Amabili angama-20-intshi (500 mm) asendleleni ebheke eBangladesh
Ama-Ellicott dredges amabili asanda kuthunyelwa eBangladesh ukuqhubeka nokuxhasa imizamo yokumba kabusha yezwe. I-Ellicott Series 2070 (20-inch / 500 mm) i-Dragon® dredges izojoyina inqwaba yamanye ama-Ellicott 18-inch (450 mm) nama-20-inch (500 mm) ama-dredges okwamanje abandakanyeka kumaphrojekthi wokugcina imifula igeleza nezingozi zezikhukhula .
Yize unyaka odlule ubonile ukwehla kokuhwebelana kwamazwe omhlaba kuyo yonke imikhakha yezimboni nasemazweni ngenxa yobhadane lweCovid-19, iBangladesh iqhubekile nokungenisa izikhukhula zemizamo yazo yokwehlisa izwe lonke. Izwe laseBangladesh lihaqwe ngumfula ogudle ulwandle ngobuningi emhlabeni, ondlezwa yimigwaqo yamanzi evela ezintabeni zaseHimalaya.
Ngesibalo sabantu abalinganiselwa ezigidini ezili-165, imifula yaseBangladesh incike kakhulu kuyindlela yokuhamba yabantu nempahla. Kodwa-ke, ama-60% kuphela wamanzi emigwaqo ehamba ezweni ehamba ngamakhilomitha angama-8,700 atholakala ngesikhathi sonyaka owomile ngenxa yokugcwala okuhlala njalo. Ama-Ellicott dredges asebenzela ukugcina le mizila yamanzi ivulekile futhi ingatholakala isebenza emifuleni eminingi emikhulu yaseBangladesh.
Cishe ingxenye yesithathu yeBangladesh ihlala ngaphansi kwamamitha amabili ngaphezulu kogu lolwandle. Njengoba amazinga olwandle eqhubeka nokukhuphuka, nomanzi eqhubeka nokugcwalisa imifula eseyivele ivalekile, usongo lwezikhukhula luyaqhubeka; enye ingozi iBangladesh isebenza ukunciphisa ukusetshenziswa kwama-dredger.
Uchungechunge I-2070 Dragon cutterhead dredge umklamo wesimanjemanje kakhulu wama-20 ”emhlabeni ohlanganisa amasu wokuklama adume umhlaba wonke ka-Ellicott. Le dredge ephathekayo ingalethwa ngeloli ezindaweni ezimaphakathi nezwe futhi iyakwazi ukudonsa ize ifike ku-50 ′ (15 m) evumela ukuthi i-dredge isebenze eziteshini ezinkulu zokuthumela. Isikebhe nendlu yensimbi yenzelwe i-Bureau of Veritas (BV) Imithetho Yamanzi Evikelwe futhi ngenxa yalokho leli dredge lilungele izicelo ezahlukahlukene kufaka phakathi ethekwini dredging, ukuguguleka komfula, ukubuyiselwa komhlaba, futhi izimayini zesihlabathi amaphrojekthi.